बिहेको डेढ महिनामै आमा बन्दै यी बलिउड नायिका, सामाजिक सञ्जालमा दिइन् सन्देश ! – Ramailo Sandesh
बिहेको डेढ महिनामै आमा बन्दै यी बलिउड नायिका, सामाजिक सञ्जालमा दिइन् सन्देश !
बलिउड नायिका दिया मिर्जाले आफू गर्भवती भएको पुष्टि गरेकी छिन्। यहि फेर्बुअरीमा व्यापारी वैभव रेखीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी दियाले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम मार्फत एक पोस्ट गर्दै आफ्ना शुभ चिन्तकलाई आफू गर्भवती रहेको जानकारी दिएकी हुन्।
पहिलो विवाह सफल हुन नसकेपछि डेढ महिना अघिमात्र दोस्रो विवाह गरेकी दियाले इन्स्टाग्राममा आफ्नो अत्यन्त प्यारो तस्बीर साझा गर्दै यो खबर दिएकी हुन्। बेबी बम्पसहितको फोटो सार्वजनिक गर्दै दियाले आफू आमा बन्न लागेको खुशी फ्यानसँग साटेकी हुन्।
दियाले अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई आफूले हेर्दै गरेको फोटो साझा गर्दै क्याप्शनमा लेखेकी छिन्, “धर्ती माता जस्तै मैले पनि आमा बन्ने आर्शिवाद पाएकी छु। एउटा यस्तो जीवनको साथ जसबाट हरेक कुराको सुरुवात हुन्छ: सबै कथाहरूको, लोरी गीतहरू, नयाँ बिरुवाहरु को । आशाको फूलको रुपमा मेरो गर्भमा पनि सपनाबाट शुद्ध सपनालाई पाल्न पाउँदा आफूलाई धन्य महशुस गर्छ।”
३९ वर्षीय नायिकालाई थुप्रै बलिउड सेलिब्रेटीले पनि बधाई दिएका छन्। ज्याक्लिन फर्नान्देज, प्रियंका चोपडा, अनुष्का शर्मा जस्ता अभिनेत्रीले दियाको फोटोमा कमेन्ट गर्दै खुब बधाई दिएका छन्।